China Amadoda imvana / iigusha noboya begusha iiglavu zasebusika ezifakwe iqhosha kunye noMvelisi | Umlandeli
Amadoda imvana / iigusha zoboya begusha ezifakwe iiglavu zasebusika ezinamaqhosha
Yenziwe ngofele lweegusha zase-Itiyopiya ngoboya begusha, i-styling yeklasikhi yesiganeko esingaqhelekanga.Iqhosha elisesandleni linokulungelelanisa ukuqina ukuze ulingane nesandla sakho. Ubume obugudileyo, obutyebileyo besikhumba, iifashoni zangoku kunye nobugcisa obukhulu. indibaniselwano egqibeleleyo! Ayishushulanga kuphela izandla zakho, ipholile kakhulu!
● Inombolo yobugcisa: EM-002
Egqithileyo Amadoda imvana / iigusha zesikhumba iiglavu ezifakwe ngombala omnyama wendalo
Okulandelayo: Amadoda imvana / iigusha zoboya begusha ezifakwe iiglavu zasebusika ezinamaqhosha